Apple dia misoratra anarana amin'ny Apple TV ao amin'ny biraon'ny patanty toa ny konsole | Avy amin'ny mac aho
Apple dia misoratra anarana amin'ny Apple TV ao amin'ny biraon'ny patanty toa ny console
Raha ara-dalàna raha miresaka momba ny patanty Apple isika dia manantena vokatra vaovao na vokatra mety ho tonga amin'ny ho avy, dia mitranga ihany koa amin'ireo patanty na fisoratana anarana ireo izay mangataka vola fotsiny ho takalon'ny tranga raha misy olona te hampiasa azy io. Amin'ity indray mitoraka ity izay ananantsika dia fisoratana anarana ho an'ny vokatra efa fantatsika ary ny tadiavinao dia ny ampidirina amin'ny lisitry ny vokatra voasoratra ho console.
Manana lalao izao ny Apple TV, fa ny fampiharana fisoratana anarana iraisam-pirenena 028 no ampiasaina amin'ny console ary io indrindra no tadiavin'ny orinasa Cupertino ho an'ny Apple TV. Fihetsika somary hafahafa ity raha jerena ny toetoetran'ny vokatra, saingy tsy izahay no hitsikera an'ity firaketana Apple ity.
Ara-dalàna i Apple Io foana no tompon'andraikitra amin'ny fampisehoana an'ity patanty ity ary izay kasain'ny orinasa hosoratana anarana dia ilay boaty ambony napetraka toy ny hoe console. Fiovana atsy ho atsy ho an'ity fitaovana ity? Ny tena marina dia feno hipoka ny tsenan'ny console ankehitriny, noho izanyary toa tsy te-"hametraka ny orona" amin'ny fanamboarana ny console intsony i Apple izao na zavatra tahaka izany.
Tsy isalasalana fa ny Apple TV ny taranaka fahefatra sy fahadimy dia manana rindran-dalao ary mamela ireo mpampiasa manana azy ireo hankafy azy ireo, saingy tsy fitaovana natao manokana ho an'ny filokana na dia manana ny fifehezana tsy misy tariby SteelSeries aza izy io ho toy ny fitaovana fanampiny. Nimbus ary ny hery sy ny fahaizana mandefa atiny 4k hiarovana, izay ahafahana manampy lohateny lalao mahaliana. Io dia mety ho izay azon'i Apple an-tanana amin'ity firaketana ity, mandefa andian-dahatsary lalao video tsara tsy tahaka ireo ananany ankehitriny izay havaozina mivantana ho an'ny boaty napetraka ambony. Ho hitantsika eo ny farany.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny mac aho » Apple products » Apple TV » Apple dia misoratra anarana amin'ny Apple TV ao amin'ny biraon'ny patanty toa ny console